The Major Challenges of Opposition Parties in Ethiopia and the Case of Leenco Lata’s ODF – Welcome to bilisummaa
By Kiya Tesfaye
The case for Oromo media is even worst. Being the largest nation, Oromo lacks access to media in Afan Oromo, which is the largest language spoken in the Horn of Africa; it is safe to to say that there is no single Afan Oromo media outlet in Ethiopia. Due to the fear of the government for independent Oromo media, Oromo political organizations suffer from the absence of freedom of media, more than others.
Kiya Tesfaye is an Oromo activist and lives in Norway; he can be reached at kiyaa28@gmail.com
Tags ADO Kiya Tesfaye Leencoo ODF TPLF
Previous Seenaa Gabaabduu Jaalle Bunguli (Abdiisaa) Hayilee
Next Rakkinni ummata Oromoo, Mootummaa Walaba Oromiyaa ijaaruudhaan furmaata argata malee, umurii cunqursaa fi saamichaa Oromoo irratti dheereffatuuf filannoo dharaa Wayyaaneen geggeessituun miti